Sidee Soomaaliya U Muuqaan Doontaa Sanadka 2050? | Xaqiiqonews
Sidee Soomaaliya U Muuqaan Doontaa Sanadka 2050?
In laga sii hadlo waxa dhici kara “Mustaqbalka” waxa ay kula muuqan kartaa “Maa laa yacni” ,ii dul qaado si aan u muujiyo Mustaqbalka Mala awaaalka ah ee Soomaaliya ay hiigsaneyso
Ma ahi faaliye, laakin waxa aan isticmaali doonaa Daraasadaha iyo Cilmi baarisyada mustaqbalka aduunka laga sameeyey si aan dadka uga sawiro qaabka ay u muuqan doonta qeybta aan dhulka kaga noolnahay ee hadda loo yaqaan “Somaaliya”.
Ma hubo, balse mustaqbalka fog Soomaaliya waxa ay dhumin doontaa mid ka mid ah diimaha ay hadda ku dhaqanto, haa waxa aan ula jeeda “diinta qabiilka”.waxaana burburi doona nidaam ka mid ah nidaamyada hadda Soomaaliya ay ku dhisantahay ee loo yaqaan “Oday Dhaqmeedka”.
marka la gaaro sanadka 2050, ma ahan Soomaaliya oo kaliya, Dunida oo dhan waxaa ka hirgeli doona nimaadka “Sayniska Maskaxda” taasi macnaheedu waxa ay tahay dadku waxa ay awoodi doonaan in internet-ka ay iskugu diraan Dareenkooda, Xasuustooda iwm.
14 Oktoobar 2050-ka, maalin kale oo muruga ah ayey u noqon kartaa shacabka Muqdisho ma ahan markani baabuur qarax ku xiranyahay oo dad laayey, balse isbadalka cimilada ayaa sababi kara in ay kor u kacda heerkulka magaalada taasi oo gaarsiin karta heerkulka 90-120 digrii, waana arin sababi karto dhimasho wadareed ka dhacda Muqdisho.
Waxa ila tahay in xaaladda noocaasi ah ay tahay mid aad u xun, hase yeeshee warka wanaagsan waxa uu yahay in Dowladda Soomaaliya ee xilligaasi jirta aysan u baahan doonin in laga caawiyo sida wax loogu qaban lahaa musiibadan dhacday.
Diyaaradaha Caqliga leh ee Is-wada , kuna qalabeysan guryaha ka sameysan qaboojiyaasha iyo mukayifyada ayaa soo daabuuli doono qaboojiyaal dheeri ah ka dib markii kuwii yiilay isgoysada ay buux dhaafiyeen dadweyne is-jiiray taasi oo dhimashada sii badisay.
Warka kale ee wanaagsan Waxa uu yahay dadka ku dhaawacmay musiibada uma baahan doonaan isbitaal dibadda ah, maxaa yeelay gudaha Muqdisho waxaa lagugu sameyn karaa in aad iska badasho xubin walbo oo jirkaada ka mid ah hadii uu dhaawac soo gaaro waliba adiga oo gurigaada jooga.
2050-ka Caasimadda Soomaaliya waxaa ah Hargeysa,balse Muqdisho oo ah magaalada ugu dadka badan islamarkaana ay ku noolyihiin 10 Milyan oo qof waxa ay noqotay Xarunta Ganacsiga, arintaasi waxa ay qeyb ka aheyd heshiis ay isla gaareen Soomaalidii Waqooyi iyo kuwii Koonfureed oo markale meesha ka saaray kala qeybsanaanta Dalka.
2050-ka magaalada Baladweyne ma jirto wax daad ama fatahaad ah, dadka ugu badan ee magaaladana waxa ay cabaan biyaha dib loo warshadeeyey ee gudaha Looga yaqaan “Biyaha celiska ah” , biyaha celiska ah ayaa ka sameysan biyihii la isticmaalay ee bulaacadaha iyo musqulaha.
Ayeeyo 60 jir ah iyo wiilkeeda oo wada saaran tareenka biiba oo dul maraya goobtii uu ku yiilay wabiga shabeelle ee Baladweyne ayaa soo xasuusan doonta “Fatahaaddii 2019” iyada oo xasuus gocaneyso ayeyna oran doontaa “Waxaan soo xasuustay biya baxadii 2019” laakin wiilka marnaba ma fahmi karo fariinta ayeeyada.
2050, dhanka Hubka, Ciidanka Dowladda Soomaaliya ayaa ku qalabeysan hubka tamarta xooggan ee “Laserka” iyo bambooyinka danabka ku shaqeeya ee E-Bomb, taasina waa sababta Kenya iyo Itoobiya ay u sameysteen ikaashi ka dhan ah Soomaaliya.
Ugu dambeyntii ma jiro qof dhihi karo waxyaabaha la saadaaliyey oo dhan been ayey noqonayaan mana jirto cid dhihi karto waa xaqiiqo, laakin dadkii dunida naga horeeyey wax badan ayey sii saadaaliyeen qaar ayaa run noqday qaarna ma aysan dhicin.